Sagalee Qeerroo Bilisummaa Oromoo Guraandhala 13 2016 -
#OromoProtests – February 15, 2016
6 thoughts on “Sagalee Qeerroo Bilisummaa Oromoo Guraandhala 13 2016”
kara qeerreo ittiin argadhuun barbaada . qarqaarsa kennu waan barbaaduuf .
Go to oromo community near to u and Contact International Qeerroo Support Group. also don’t give money to individual unless you meet someone who represent IQSG
Qeerroo jabahdaa, gafii xinnoo isshee qabaa?
1.Agaziin ammas Oromia kessaa demaa jiraa, badiyaa kessaa demaa jiraa. Dhadhabaa jiraa moo akkaam?
2.Ummaanii Oromo gara offiin off bulechutii demaa jiraa moo akkaam?
3.Oromon hidhamaa jiru dabalaa jiraa, kana xinessuf malee ta’aa jiraa?ykn malee fidaa jiraa hidhaan kun?
4.OPDOn jirjiiraama hin jiretu? kana irraatii ummaanii Oromo male gochu qabaa?
Maqootaa; Lixaa Shagar, Lixaa Godinaa Shewaa, Finnefinee Kan jehdaan xino ishee nama afaanfanjessaa fakkataa,
Akkaa bekaamutii Shagar jechun Finnfinee jechu dha akka yeroo sanatii jiruun, FKN Mojo–lixaa shagar ta’u hin beekaamu. Kanaf wan akkasii kun ottoo sirayee bayee garii fakkataa.Iddoon maqaa qabu, kanaf maqaa qabanin wamamuu issanii barebachissaadha. Dukam, Dukam jedhamu qaba.
Shawaa jechuun jecha Amaaraati kanaan waamuun maqaa gabrummaa fudhachuudha. Shaggar maqaa sirrii natti fakkaata, Finfinneen handhuura yoo gara finfinnee jiraatte moojiin lixa irratti argamti kanaaf Shawaa jechuu irra Shaggar yoo jenne waan eenyummaa keenyatti nu boonsu natti fakkaata jedheen yaada,worri qeerroodhaas dhugaa jedhan.
1. Akkaa beekaamutii Shagar Jechun Finnifinee Jechu dha, Shagar =Finnifinee. Amaa Oromon JIjiree Shagar=Shewa, Oromon maqaa Shagar jedhu kanan shewaa bakka bussee jiraa yoo jettaa ta’ee sun irraatii hasa’aamu qaba.
2. Magalaan nanaoo san jiraan hundiinu maqaa mataa issannii qabu Sandafaa, Buraayuu, Sebeta, Dukam, Alemgena, Bole, Aqaqii, etc.Kanaf iffaa motii akkataa Shagar ittii fayaadaamaa jiru, kanafaan gaffaadhee,
Dhumaa irratii gaffiin kun nama walliin qabaatu hin qabu media adda adda irraatii dhaga’aamaa jiraa wan ta’eef. Kanaf hundinnu wan tokko iraatii wallii galu qabaa.